Saul Niguez tantara an-tsary momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Home STARS EUROPEAN Saul Niguez tantara an-tsary momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Febroary 26, 2019
Saul Níguez tantara an-tsary momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra. Vola amin'ny YouTube sy Instagram
Ny LB dia manolotra ny tantara feno momba ny saka mpilalao baolina kitra izay fantatra amin'ny anarana; "Niguez". Ny pejinay momba ny tantaram-pahaterahana nosoratan'i Saul Niguez momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaram-piainan'ny tsy fantatra anarana dia mitondra fitantarana feno momba ireo zava-mitranga mahatalanjona hatramin'ny andron'ny fahazazany hatramin'izao. Ny fanadihadihana dia ny fiainany teo aloha, ny fiainam-pianakaviana, ny tantaram-piainana talohan'ny laza, ny fiantsoana tantara, ny fifandraisana ary ny fiainana manokana sns.
Eny, fantatry ny rehetra fa iray amin'ireo ivon-toeran'ny ivon-toeran'ny parlemanta ao Eoropa izy. Na izany aza, vitsivitsy ihany no mandinika ny tantaran'i Saoly Niguez izay tena mahaliana. Ankehitriny tsy misy ado, aleo atomboka.
Saoly Niguez tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana misimisy kokoa momba ny tantaram-piainana- Voalohandohan'ny fiainana
Saoly Níguez Esclapez dia teraka tamin'ny 21 Novambra 1994 ho an'ny reniny, Pilar Esclápez sy ny rainy, José Antonio Ñíguez ao Elche, Espaina. Ity ambany ity ny sarin'ny ray aman-drenin'i Saoly izay miavonavona amin'ny zava-bitan'ny zanany farany teraka.
Ny ray aman-drenin'i Saul Níguez- Pilar Esclápez sy José Antonio Ñíguez. Bola amin'ny Instagram
Saul Niguez Herinandro:
Ny fianakavian'i Saul Niguez dia avy amin'ny vondrom-piarahamonin'i Valencien avy any Espana. Ity foko ity dia miteny ny fiteny Valencienne ary ny mponina 4.9 tapitrisa dia ny vondron'olona be mponina indrindra any Andalusia, Catalonia ary Madrid.
Ny fiavian'i Saoly Níguez. Bola ho an'i Asya Pereltsvaig sy Instagram
Saoly Niguez Family Background:
Tonga avy amin'ny trano fanatanjahan-tena i Saoly, fianakaviana iray izay mitaingina baolina amin'ny fototarazon'ny lahy rehetra lahy. Fantatrao ve?… Ny filohan'i Saoly, José, sarin'i Saoly, sary eto ambany, dia nilalao ho mpikatroka ny klioban'ny Elche, tanàna niaviany, nandritra ny taona maro.
Ny Rain'i Saoly Níguez - José Antonio Ñíguez. Bola ho an'i Emporda
Sarotra ho an'i José Antonio ny niatrika ny fisotroan-dronono taorian'ny nahalasa ny asany tamin'ny lalao baolina kitra. Ilay mpilalao baolina taloha teo amin'ny fisotroan-dronono dia nanapa-kevitra ny hanohy hiaina ny nofiny amin'ny zanany lahy. Saul Niguez sy ireo rahalahiny roa lehibe nitangala an'i Jonathan sy i Aharôna rehetra dia nihalehibe ho mpilalao baolina toy ny rainy.
Saoly Níguez Brothers- Jonathan sy Aarón Níguez. Credit to ABC
Saoly Niguez tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana misimisy kokoa momba ny tantaram-piainana- Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana
Ny toetra mampiavaka ny maha-zandriny indrindra an'i Saoly Niguez no nahatonga an'i Niguez ho anisan'ny zaza tsy manan-danja indrindra sy be mpanohana indrindra ao amin'ny fianakaviana. Anisan'ny rahalahiny izy, ary izy no nanana ny toetrany matanjaka indrindra.
Ny fitiavan'i Saoly Niguez ny baolina dia nahita ny rainy nanoratra azy tao amin'ny lisitry ny akademian'ny klioban'ny Elche CF, izay nanome azy ny sehatra hanehoana ny talentany. Saul Niguez dia nisy fiantraikany avy hatrany tany Elche izay nahita azy nitsangantsangana haingana noho ny taonan'ny tarika taonany mba ho lasa kapitenin'ny ekipany.
Saoly Níguez Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana. Bola amin'ny Instagram
Saoly Niguez dia nanao sorona maro tao amin'ny akademia izay nahita azy nandao ny namany. Indraindray dia tsy maintsy nandiso ny antoko taonany izy. Saingy teo am-pandehanana dia faly be izy nanao izay tiany. Ny nahatonga azy ho tsara indrindra teo amin'ny sokajin-taonany dia nanao azy ny sangan'asan'ny Akademia Real Madrid izay nahazo azy tamin'ny taona 2006.
Saoly Niguez tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana misimisy kokoa momba ny tantaram-piainana- Road to Fame
Voasaringotra i Saoly fony izy tao amin'ny Real Madrid Academy:
Tanora Saoly Níguez tao Real Madrid. Credit to SportsKeedia.
Saoly Niguez dia mpilalao tanora Madrid Real Madrid taorian'ny nalain'ny klioba tamin'ny taona 11 tamin'ny taona 2006. Tsy nanana fotoana tsara indrindra tao amin'ny Akademia i Saoly na dia teo aza izany nikarakara tamim-pitandremana fatratra.
Araka ny Sportskeedia, Dia nilaza i Saul Niguez fa resaka mikasika ny fampijaliana sy ny hatezerana ataon'ny olona tsy fantany. Tamin'ny resadresaka niarahana tamin'ny 'El Mundo', hoy izy,
"Nianatra zavatra be dia be aho tamin'io taona io tamin'i Madrid, ary nihamaro aho. Fotoan-tsarotra ho ahy koa izany satria maro ireo zavatra tsy fanatanjahatena nitranga. "
Nanambara i Saoly fa ireo olona tsy fantatra dia nandroba ny kiraroko, ny sakafo ary nanakana azy tsy hiofana mandritra ny tapa-bolana. Ireo olona ratsy ireo koa dia nandrafitra azy tamin'ny famoahana taratasy ho an'ny mpitantana ny zatovo izay nanambara fa nanoratra izany izy.
Vetivety monja dia tsy nahavita niaritra ireo fifaninanana ireo i Saoly. Rehefa nifampidinika tamin'ny namana sy ny fianakaviany izy dia nanapa-kevitra ny handao ny klioba. Izany dia tamin'ny taona 2008.
Saoly Niguez tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana misimisy kokoa momba ny tantaram-piainana- Mitsangàna mba ho ankizilahy
Ny fidirana amin'ny Madrid Real Madrid mpifanolo-bodirindrina dia fanapahan-kevitra hendry dia nomena ny fomba nitomboan'i Saoly hatramin'izao. Raha tao amin'ny Akademia Atlético Madrid, dia nahazo fitsaboana tsara indrindra i Saoly. Nifanaraka tamin'ny lalao fifaninanana 200 mihoatra noho ny ekipa tanora tao amin'ny klioba izy ary nisoroka ny toerana mahafinaritra an'i Manchester United sy Arsenal.
Tahaka ny tamin'ny fotoana nanoratana, Saoly Niguez dia nanantona ny anarany tao amin'ny tranokalan'ny Athletico Madrid noho ny fanangonam-bokony.
Niakatra i Saul Níguez. Credit amin'ny Facebook sy Instagram
Ny ambiny, araka ny filazan'izy ireo, dia tantara.
Saoly Niguez tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana misimisy kokoa momba ny tantaram-piainana- Relationship Life
Ao ambadiky ny mpilalao baolina mahomby dia misy sipa mahafinaritra ao amin'ny olona an'i Yaiza izay mitovy amin'ny Celine Dion malaza.
Saoly Niguez sy Yaiza. Bola ho diario AS.
Raha jerena avy amin'ny sary etsy ambony, dia hanaiky ianao fa ny maha-mpilalao mahafatifaty dia mendrika karazana iray tena tsara tarehy.
Yaiza dia brunette tsara tarehy izay miteraka fahatokisana amin'ny tsirairay avy aminy. Olona tsy tia olona izy, izay tsy manao afa-tsy ny manome fanohanana ara-pihetseham-po ho an'ny lehilahy, na dia midika aza ny fametrahana ny fiainany manokana.
Ny fiarahan'ny mpifankatia dia miara-misakafo mandritra ny fotoana tsy ampoizina fa ny fampakaram-bady dia mety ho ny dingana manaraka.
Saoly Niguez tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana misimisy kokoa momba ny tantaram-piainana- Fiainana manokana
Ny hahafantaranao ny fiainan'i Saoly Niguez dia hanampy anao hahazo sary feno azy. Hatramin'izay, izy dia olona iray izay sarobidy zavatra telo amin'ny ankapobeny. Izy ireo dia; ny fianakaviany, ny sipany ary ny alika, ny iray amin'izy ireo dia aseho eto ambany.
Saul Níguez sy ny alikany. Bola amin'ny Instagram
Ireo mpilalao baolina kitra, tahaka ny antsika rehetra, tia ny biby fiompiny ary i Saul Nuguez dia tsy fiatoana. Na dia miteny aza ianao fa tsy misy ny tsy fivadihana tavela ao amin'ny lalao maoderina, dia tsy midika akory izany fa ny fifandraisana matanjaka misy eo amin'i Yaiza, Saul ary ny alikany.
Fantatrao ve?… Raha i Saoly Nuguez vadin'i Yaiza dia tsy sahirana mihomehy ny lehilahy, dia mandany ny ankamaroan'ny fotoanany amin'ny fikarakarana ny alikany izay manana ny anarany; Boris sy Thaila.
Ny fiainan'ny tena manokana nataon'i Saoly Níguez. Bola amin'ny Instagram
Saoly Niguez tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana misimisy kokoa momba ny tantaram-piainana- Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Momba ny ray aman-drenin'i Saoly Niguez:
Avy amin'ny fianakaviana iray manetry tena i Saoly, iray izay ny mpikambana ao aminy no mahita dikany amin'ny mpilalao baolina kitra ary tsy misy hafa amin'izany. samy Pilar Esclápez sy José Antonio Ñíguez amin'izao fotoana izao Miaina fiainana sambatra sy mahomby noho ny fahaiza-manaonyary ny tsara indrindra amin'ny zanany. Ny fotoana nahaterahana dia mamaritra ny fotoana ankalazain'ny fianakaviana.
Ny ray aman-drenin'i Saul Níguez - reny, Pilar Esclápez sy ny ray, José Antonio Ñíguez
About Saul Niguez Mpikambana:
Saoly Níguez's Brothers- Jonathan (havia) sy Aaron (Middle). Bola amin'ny Instagram
Ilay lehilahy teo afovoany, i Aharôna no faharoa faharoa tamin'i Saoly zokiny indrindra. Enina taona izy noho i Saoly. Nitsangana tamin'ny alàlan'ny rafi-pampianarana tanora tao Valencia i Aaron. Tahaka ny tamin'ny fotoana nanoratana, dia izy dia mpihira ho an'ny klioba Maleziana Johor Darul Ta'zim FC
I Jonathan no zokiny indrindra tamin'ireo rahalahin'i Niguez. Izy no 9 taona zokiny noho i Saoly. Tahaka an'i Arona, dia nentina ihany koa izy tao amin'ny rafitra tanora tao Valencia. Mpilalao baolina kitra ho an'i Elche amin'izao fotoana izao i Jonathan.
Saoly Niguez tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana misimisy kokoa momba ny tantaram-piainana- Lifestyle
Nandritra ny fijerena ny tantaram-piainany teo amin'ny fiainany, dia hitanay fa tsy i Saoly no karazan'ny mpilalao baolina kitra izay miaina ny Lavily Lifestyle mora hita avy amin'ny fiara marevaka maro be, be dia be, trondro, zazavavy, trano tsara tarehy.
Na dia mendrika ny vidin'ny vola eo amin'ny € 90,000 Million aza izy, dia miaina fiainana sambatra, mahazatra, ary antonony.
Saul Níguez Fiainana LifeStyle. Bola amin'ny Instagram
Saoly Niguez tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana misimisy kokoa momba ny tantaram-piainana- Untold Facts
Raha vantany vao tafapetraka ny baolina talohan'ny fahasalamany:
Fantatrao ve?… Saoly Niguez dia tsy maintsy nandany volana maromaro tamin'ny fanaintainana sy ny tsy fahampiana, nandroaka ra. Fotoana iray nohadihadiana tamin'ny aretin'ny voa. Na dia izany aza, te-hanao ny baolina kitra i Saoly rehetra.
Saoly Níguez ny olana ao an-drenivohitra - ilay tantara tsy nambara. Bola ho an'i DreamTeam sy WebMD
Araka ny TheGuardian, noraisin'ny mpanafatra mpanampy an'i Athletico Madrid ho mpitsabo ny toe-draharaha. El Mono Burgos, mpilalao baolina lavalava Athletico Madrid, dia nahita an'i Saoly teo amin'ny masony ary nanome torohevitra azy.
"Ary nahita aho" ... hoy Saúl.
Sarin'ny alemà El Mono Burgos. Bola ho an'ny Alchetron
Ho an'i Saoly, nihaino ny alemana El Mono Burgos dia nahatsapa raha niresaka taminy tamim-pahombiazana izy fony izy efa voan'ny kansera tamin'ny 2003. Tamin'izay fotoana izay, nangataka azy hiandry ny alatsinainy ireo dokotera mba hanesorana ny fivontosana. Nandà i Mono ary nanizingizina fa tokony halefa avy hatrany izy.
Fankatoavana an'i Diego Simeone:
Saoly Níguez Fakan-kevitra tsy fantatra - Ny tsy fivadihana Diego Simeone. Credit to SportsKeeda
Nanambara i Saul Niguez vao haingana tao anaty tafatafa fa te-hijanona ao amin'ny Atletico izy ho an'ny fiainana. Antony lehibe iray vokatry ny fanajany Diego Simeone.
Ny tanjony farany:
Credit to Atleti Studio, Nanam-paharetana i Saoly fa antsoina hoe "foiben'ny kianja" izy, ary tsy matahotra hatahotra ny hitifitra lavitra.
Credit to Soccer Eleven, I Saoly dia voaporofo fa tompon'ny "Barcelone style"Araka ny hita ao amin'ny tanjony etsy ambany. Izany dia manazava ny antony nanaovan'i FC Barcelone tamin'ny fotoana nanoratana azy ho fanesorana tapitrisa € 110 eo aminy.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra ny famakiana ny tantaram-pianakavian'i Saoly Niguez momba ny tantaram-pahavitrihana bebe kokoa momba ny tantaram-piainana tsy fantatra. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.
Tantaran'i Child L Marcosente momba ny fahazazan-jaza fanampiny Untold Biography Facts
Mariano Diaz Tantaran'ny Ankizy Iray Manampy Untold Biography Facts
Tantara Quique Setien Childhood plus Untold Biography Facts
Tantara momba ny fahazazan-janaka ao amin'ny Dani Olmo miampy Untold Biography Facts
Mikel Arteta Tantaran'ny Ankizy Miampy Untold Biography Facts
Tantara momba ny fahazazan-janaka Daniel Parejo miampy Untold Biography Facts
Ny tantara momba ny fahazazan-dahatsoratra ho an'i Rodrigo Moreno miampy Untold Biography Facts
Adama Traore Tantara Firaisana Ankizy Miampy Untold Biography Facts
Tantara momba ny fahazazan'ny zaza ao amin'ny Coldos sy Untold Biography Facts
Rodrigo Hernandez tantara an-tsarimihetsika momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Lorenzo Sanz Childhoood Tantara Manampy Untold Biography Facts
vannyhenrico - March 29, 2020
Tantara momba ny fahazazan'ny zaza zaza ao Daniele Rugani miampy Untold Biography Facts
vannyhenrico - March 29, 2020 0
vannyhenrico - March 25, 2020 0
Ny tantaran'i Juan Mata momba ny tantaram-pahaterahana bebe kokoa no hitantsika momba ny tantaram-pitiavana
Septambra 19, 2017
Desambra 18, 2019
Thiago Alcantara tantara momba ny tantaram-pianakaviana malaza tsy fantatra intsony momba ny tantaram-piainana
Aprily 16, 2018
Ny tantaram-piainan'ny Diego Simeone ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-pianakaviana mbola tsy fantatra
Jolay 13, 2017
Antoine Griezmann Tantara Momba ny Tantaram-pahamendrehana Ankapobe Zava-dehibe
Septambra 22, 2017
Ny tantaram-pianakavian'i Koke Childhood Plus untold